7 Ndụmọdụ iji zere ịkpa nkata na Europe | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Travel Atụmatụ > 7 Ndụmọdụ iji zere ịkpa nkata na Europe
Njem Europe, Travel Atụmatụ
Obodo ịhụnanya oge ochie, ubi mara mma, oghere ndị mara mma, na -adọta ọtụtụ nde ndị njem nleta na Europe kwa ụbọchị. Ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na -eleta Europe ka ha nyochaa akụkọ ihe mere eme na ịma mma ya wee hụ onwe ha ka ndị aghụghọ dị n'akpa uwe ndị ama ama na ama ama ama ama na Europe.. Nọrọ na nchekwa n'oge njem gị dị ịtụnanya site n'ịgbaso ndụmọdụ ndị a ka ị ghara ịkpa nkata na Europe.
1. Atụmatụ iji zere ịkpa nkata: Mara mpaghara egwu
Ịmara ebe ịga gị na -arụ nnukwu ọrụ n'inwe oge kacha mma na ndụ gị. Ya mere, mgbe ị na -eme atụmatụ ezumike gị na Italy ma ọ bụ France, ị kwesịrị ime nyocha ebe ndị a ga-ahụrịrị yana ntụpọ dị egwu. Ọ dịghị ihe mere ị ga -eji na -echegbu onwe gị, ị gaghị ahụ onwe gị n'agha ndị otu, mana ebe ọ bụla nwere ọnọdụ mmetụta ọsọ ọsọ, ebe ndị njem nlegharị anya kwesịrị itinye uche pụrụ iche n'ihe ha nwere ma na-elezi anya maka akpa akpa.
n'ozuzu, ebe ị kwesịrị ịkpachara anya, bụ ebe dị ka ahịa fụla, ama ama n'ámá ndị ama ama, na njem ọha na eze tụrụ. Ihe ebe ndị a niile jikọrọ ọnụ bụ na mmadụ juru ebe niile, yabụ ka ị na -elele n'Ụlọ Eiffel ma ọ bụ Katidral Milan, akpa nkata nwere ike ịdaba n'ime gị n'ụzọ dị mfe, na n'ime sekọnd, obere akpa gị apụla. Ịmara gburugburu gị na igwe mmadụ bụ isi ihe dị elu iji zere ịkpa nkata na Europe.
2. Nyocha aghụghọ aghụghọ na wayo
Onye mara mma mara mma ma ọ bụ ihe na-adaba n'ime ya bụ 2 nke aghụghọ ojoro ịcha kacha elu na Europe. Dị nnọọ ka obodo ọ bụla dị na Europe nwere anwansi na akara ala ya, otu ihe ahụ na -eji aghụghọ ịkpa nkata. Ya mere, ọ bụrụ na -ịchọrọ ịdebe ihe gị dị oke ọnụ ahịa, mee nyocha tupu oge eruo maka aghụghọ ịchụ nta ego nkịtị na ebe ị na-aga.
Ọmụmaatụ ndị ọzọ maka igwu wayo akpaka bụ ọmarịcha onye ọbịa na -arịọ oge ma ọ bụ ntụzịaka. Mgbe ị na -enyocha maapụ gị, ma ọ bụ na -ekiri, ha na -abịaru nso were ihe ọ bụla dị n'akpa ma ọ bụ n'akpa gị. Ya mere, kpachara anya ma ghara ịda maka otu n'ime 12 isi ihe ojoo na -eme njem n'ụwa.
Paris jiri ụgbọ oloko gaa London
Berlin gaa London na ụgbọ oloko
Brussels na ụgbọ oloko gaa London
3. Atụmatụ iji zere ịkpa nkata: Hapụ ihe bara uru na nkwari akụ
Ịhapụ paspọtụ, kaadị akwụmụgwọ, na ihe ịchọ mma na nchekwa ụlọ oriri na ọ hotelụ isụ bụ otu n'ime ndụmọdụ kachasị iji zere ịkpa nkata na Europe. Dị ka e kwuru n'ihu, ndị na -atụtụ ego nwere nka maka ịmata kpọmkwem ebe a ga -ahụ ihe ndị dị oke ọnụ na -enweghị ndị njem nleta. Ọzọkwa, taa mgbe ị nwere ike nweta oyiri paspọtụ gị na email ma ọ bụ ekwentị gị, ma ọ bụ depụta tiketi nlegharị anya n'ịntanetị, ọ nweghị ihe mere ị ga-eji buru ego gị ma ọ bụ kaadị kredit gị niile.
Ya mere, tupu ị pụọ ịwagharị n'otu n'ime ụlọ ahịa flea kacha mma na Europe, were naanị obere ego. Enweghịkwa ihe mere ị ga -eji ebu kredit gị niile, ma ọ bụrụ na ị na -esi ọnwụ, gbasaa ego na kaadị n'ime akpa dị iche iche dị n'ime ma ọ bụ eriri ego.
4. Debe ihe ndị dị oke ọnụ ahịa n'ime akpa
Akpa ego n'ụbọchị anwụ ma ọ bụ akpa jaket dị n'ime bụ ụzọ dị mma iji chekwaa akụ gị. Aghụghọ njem a dị mfe ịme mgbe ị na -eyi akwa, n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ n'oge oyi, ọ nwere ike ghara iru gị ala mgbe ihu igwe na -ekpo ọkụ na iru mmiri.
Ị nwere ike zụta eriri ego na njem ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa ihe ncheta n'ụlọ ma ọ bụ n'oge njem ahụ, ọmụmaatụ na ọdụ ụgbọ oloko etiti ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu. Uru ịdebe ihe n'akpa uwe pụtara ìhè, ndị na -anya ụgbọ elu nwere ike ịbata gị, mana ọ gaghị enwe ike iru n'ofe akpa jeans gị. Ụzọ a, ị nwere ike jiri obi ụtọ gaa n'ihu na -agagharị ma na -enyocha ọmarịcha akara na Europe.
5. Weta akpa gafee, Ọ bụghị azu paaki
Mgbe ị na -awagharị n'okporo ụzọ Europe mara mma, ma ọ bụ kwụ n'ahịrị na Louvre ị kwesịrị inwe ahụ iru ala. Yiri akpụkpọ ụkwụ dị mma dị mkpa dị ka ịnwe akpa akpa mgbe ị na-eme njem. Akpa ozu ga-apụta njem enweghị nchekasị, n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ị na-ele anya n'ubu ka ị mara ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-efefe gị n'ahịrị ndị mmadụ juru..
Ọzọkwa, ị nwere ike weghara karama mmiri ma ọ bụ obere akpa n'ime akpa ahụ. Ya mere, iweta akpa ozu ga-adị mma iji zere ịkpa aka n'akpa uwe na Europe, yana nlegharị anya n'ụzọ dị mfe na nke ntụsara ahụ.
6. Atụmatụ iji zere ịkpa nkata: Uwe na ime ihe dika mpaghara
Otu n'ime ihe na -enye onye njem nlegharị anya ndị ọkachamara n'akpa uwe bụ ụdị njem nlegharị anya pụrụ iche: akpa ego, sportive eyi, ma na -eme dị ka onye njem nleta. Katidral, ebe ochie, na ọtụtụ akara dị na Europe dị egwu nke na ndị njem na -akwụsịkarị na -elegide anya, ma ọ bụ were ọtụtụ narị foto.
Ndụmọdụ kacha mma iji zere ịkpa aka n'akpa uwe na Europe bụ ịgwakọta na igwe mmadụ. Ya mere, dị nnọọ ka ị na -ebu ụzọ achọpụta ebe kacha mma ị ga -eleta na njem njem gị, lelee ọnọdụ na omenala obodo.
Lyon jiri ụgbọ oloko gaa Geneva
Zurich jiri ụgbọ oloko gaa Geneva
Site na ụgbọ oloko gaa Paris na Geneva
Site na ụgbọ oloko si Bern gaa Geneva
7. Atụmatụ iji zere ịkpa nkata: Nwee Insurance mkpuchi njem
Inweta mkpuchi njem tupu njem ahụ dị mkpa. Taa ị nwere ike nweta mkpuchi nke ihe gị dị oke ọnụ ahịa na akpa gị, naanị ma ọ bụrụ na ọ ga-efunahụ ma ọ bụ na nke a, ezuru. Mkpuchi mkpuchi njem nwere ike ịzọpụta ndụ ma ọ bụrụ na ezuru obere akpa gị na kaadị gị, na mba ọzọ na -enweghị onye ga -abịa nyere aka.
Na ngwụcha, ime njem bụ nnukwu ụzọ inyocha omenala, mba ma chọpụta echiche dị ịtụnanya. Ọtụtụ ahụmahụ njem dị ịtụnanya ma ọ dị ụkọ na ndị njem nleta na-ezute ịkpa nkata na Europe. Otú ọ dị, ọ kacha mma mgbe niile ịkwadebe na ịkpachapụ anya, dị ka ịgbaso ndụmọdụ anyị gbasara otu esi ezere ịkpa nkata na Europe.
ebe a na Chekwa ụgbọ oloko, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike dị nchebe na agaghị echefu echefu na ụgbọ oloko ọ bụla na Europe.
Ịchọrọ itinye ozi na blọgụ anyị “Ndụmọdụ Iji Zere Ntanye Aka na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-avoid-pickpockets-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
AvoidPickpockets	Europetraveltips	Pickpockets	scams	njem nlegharị anya
Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem France, Ụgbọ oloko njem Holland, Inzọ Njem Italytali, Njem Europe
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Njem Europe
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe